China Towable Boom Lift Manufacturer na onye na -ebubata ya Daxin
Igwe a na -ebuli elu na -adọkpụ bụ otu n'ime ngwaahịa anyị. Ọ nwere elu mgbago elu, nnukwu ebe ọrụ, na ogwe aka nwere ike apịaji karịa ihe mgbochi na mbara igwe.Max Platform dị elu nwere ike iru 16m na ikike 200kg.
Oke nha nke ikpo okwu: Ogologo: 900mm*700mm
Oke ikike: 200kg
Ogologo oke Max Platform: 10m ~ 16m
Towable Boom Lift bụ ụdị ngwa eji ebuli hydraulic nke nwere ike ịtụgharị 360 Celsius iji bulie ndị na -aga ije ma ọ bụ ngwongwo. Anyị nwere ọtụtụ ụdị nke ọganihu ebuli ịhọrọ site na. Companylọ ọrụ anyị nwere ike ịnye mbuli elu na mbuli elumbuli elu na-ebuli onwe ya elu. Ngwa ebuli hydraulic nwere njirimara nke ngagharị dị mma, ọrụ dị mfe, nnukwu ọrụ na -arụ ọrụ yana ezigbo nguzozi. A na-ejikarị booms na-adọkpụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na ubi ndị chọrọ ịrụ ọrụ dị elu dịka ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, na ụlọ ọha. Họrọ akụrụngwa ihe owuwu ịchọrọ wee bịakwute m maka nkọwa zuru ezu. Ogo na ọrụ anyị agaghị emechu gị ihu.
Ajụjụ: Ọ dị mkpa ka etinyere ogwe aka mpịachi iji rụọ ọrụ?
A: Nke a dabere na mkpa gị ịhọrọ DC ma ọ bụ AC, anyị nwere ike nye ya.
Ajụjụ: Gịnị ma ọ bụrụ na m chọrọ ịma ọnụahịa a kapịrị ọnụ?
A: Ị nwere ike pịa "Zitere anyị email" na ibe ngwaahịa iji zitere anyị email, ma ọ bụ pịa "Kpọtụrụ anyị" maka ozi kọntaktị ọzọ. Anyị ga -ahụ wee zaa ajụjụ niile ozi ozi kọntaktị natara.
Ajụjụ: Ngwaahịa gị enwere bọtịnụ nkwụsị mberede?
A: Ngwaahịa anyị nwere bọtịnụ nkwụsị mberede iji hụ na nchekwa nke ndị na -arụ ọrụ anyị ma ọ bụrụ na ike daa ma ọ bụ ọnọdụ mberede ndị ọzọ.
Ajụjụ: Ọnụ ahịa gị ọ nwere uru asọmpi?
A: Ụlọ ọrụ anyị ewepụtala ọtụtụ ahịrị mmepụta nwere arụmọrụ dị elu, ụkpụrụ ịdị mma ngwaahịa, yana belata ọnụ ahịa nrụpụta ruo oke, yabụ ọnụahịa ya dị mma.
Otu n'ime ndị ahịa anyị na South Korea zụtara ogwe aka ụgbọala na -adọkpụ nke a na -ejikarị arụzi na idozi ọdụ ụgbọ elu. Ebe ọ bụ na ọdụ ụgbọ elu nwere nnukwu mpaghara, ha nwere ike jiri ụgbọ ala na -adọkpụ ogwe aka na -adọkpụ ka ọ rụọ ọrụ ndozi ma ọ bụ nhicha ọ bụla. Ha nwere ike ijikwa ọrụ ịdị elu dị mfe mgbe ịzụrụ ogwe aka apịachi. Ogwe aka na -adọkpụ azụ nwere ike ịtụgharị 360 Celsius, nke na -eme ka ọrụ ikuku ya buru ibu. N'ụzọ dị otu a, ọ dịghị mkpa ịgbanwe ọnọdụ ugboro ugboro ka ị na -arụ ọrụ.
Onye ahịa French anyị zụtara igwe ihe owuwu anyị maka ojiji n'ime obodo. Ngwa ihe owuwu nwere ike ijere ndị nwe obodo ozi, na-asacha iko dị elu, na-akwacha osisi toro ogologo ma ọ bụ na-arụzi ụfọdụ ngwaọrụ igwe dị elu. Ogwe aka mpịachi nwere ikike siri ike ịgafe ihe mgbochi na elu dị elu, ọ dịkwa mma iji ya na gburugburu ebe obibi dị mgbagwoju anya. Sistemụ hydraulic na -ebuli ikpo okwu dị elu, yabụ na ọ kwụsiri ike ma dịkwa nchebe, ndị ọrụ na -arụkwa ọrụ nke ọma.
Ịdị elu ọrụ
Nha nke ikpo okwu
Radius na -arụ ọrụ
N'ozuzu Size (L*W*H)
Ịkwado Ogologo Ogologo Ụkwụ (kwụpụrụ)
Ịkwado Anya Stride (kwụ ọtọ)
Ọkwa ikuku nkwụsị
20 '/40' akpa ihe na -ebu ibu
Ntọala 40 '/2
Ike mmanụ dizel (YSD Motor)
Otutu ụdịdị ike dị
Mmanụ ụgbọala (Honda Motor)
Ike ọkụ eletrik (Xi'an Motor)
Ike batrị DC (Bucher Motor)
Dizel + Ike AC (Ike ngwakọ)
Ike + Ike AC (Ike ngwakọ)
Dizel + Ike DC (Ike ngwakọ)
Ike gas + DC (ike ngwakọ)
Ike AC + DC (Ike ngwakọ)
Ìhè LED na nkata maka ọrụ abalị (EGO)
Ọdụ ọdụ & ọkụ breeki (EGO)
Ìhè ịdọ aka na ntị na 4pcs ụkwụ na -akwado akpaka (EGO)
Germany na -ebubata brako Brand ALKO (EGO)
Ogwe njikwa ihe akaebe mmiri n'elu ikpo okwu
Ogwe njikwa mmiri anaghị egbochi nchekwa abụọ
Igbe eletrik na -enweghị mmiri, ihe ngosi ike batrị, nkwụsị mberede
YSD mmanụ ụgbọala
Diesel/Gas Motor nwere ngwa ngwa akwụkwọ ntuziaka.
Injin mmanụ ụgbọala Honda (Nhọrọ)
Switzerland Bucher DC Batrị moto (Nhọrọ)
Ogwe Torsion nwere nnukwu ọrụ nnabata ujo,
Wheel Rubber Pneumatic, Breeki Igwe Ọdụdọ
Cylinder Way na Balance Valve & Mgbanwe Mbelata Mberede
Kpọmkwem Hydraulic Hose, enweghị mmanụ mwụfu
Ogwe njikwa maka 4pcs Automatic Hydraulic Legs Support
Sistemụ mkpu mkpu tank tank mmanụ
2 Windows maka mmezi dị mfe
360degree Turn Plate na Speed ​​Reducer Technology Motor.
Telescopic Boom maka ụdị ihe nlereanya 14m 16m
Mmekọrịta pụrụ iche nke ejikọtara ọnụ
Kpọmkwem Njikọ Njikọ/Mkpọchi
Ihe mgbochi mmịfe nke Ọganihu Telescopic
Nkata na -adigide nwere Njirimara Nwegide Ncha
Ladder na ọnụ ụzọ nke Platform
Nkata Gbanwee Ngbanwe Ọkwa
Mkpọchi nchekwa nke nkata na -egbochi ịma jijiji mgbe ị na -ekuru nkata ahụ.
Obere Cylinder n'okpuru nkata iji dobe ikpo okwu
Na -eweli ma na -edokwa Chain Balance
Mkpọchi nchekwa nke ogwe aka. Gbochie ịma jijiji mgbe a na -ebuli ya
Tilt Angle Sensor, Platform agaghị ebili/gbadaa ma ọ bụrụ na ahụ karịrị 4
Mgbanwe nwere oke maka ịkpachara anya nchekwa
Enwere ike ijikọ Siren ma ọ bụ kwụpụ ya
Mkpanaka Mkpanaka a na -apụghị ịgbagha agbagha
Magburu onwe Ịcha na ntụ ntụ mkpuchi Ịgba Agba
Wiring na Hydraulic Hoses dị mma
Kachasị kọmpụta na nkenke nhazi ihe owuwu
4pcs Ụkwụ na -akwado hydraulic na -arụ ọrụ na -emezigharị akụkụ
Wheel Balance Wheel
Ndenye ịdọ aka na ntị zuru ezu
Nke gara aga: Ndị na -ebubata oche nkwagharị ihe China na -eji ebe obibi na ọnụ ahịa akụ na ụba
Osote: Tebụl ebuli profaịlụ dị ala
v Kwadebe Germany AKWỤKWỌ brek ika nwere oke mma
v Kwadebe Swizaland Onye nchoputa ụlọ ọrụ mgbapụta ika DC
v Kwadebe Japan Honda ika Gas ebe mgbapụta
v Kwadebe Ndị China ama ama YSD ika mgbapụta mmanụ dizel
v Kwadebe waterproof na igbe eletriki na -egosi uzuzu.Adabara n'èzí na -arụ ọrụ.
v Ogwe njikwa mmiril nwere ike kwadebe mgbe mmiri na -ezo.
v Ọkwa onwe naanị maka ịrụ ọrụ nke ọma na nchekwa
v Injin mmanụ dizel, moto na mkpuchi batrị
v mmadụ oghere oghere maka ndozi dị mma kwa ụbọchị
v Onye na -eme ngwangwa mmanụ dizel na -arụ ọrụ karịa ka ọ ga -arụ ọrụ.
v Abụọ ụzọ cylinders na itule valvụ na mberede ojuju mgba ọkụ. Ọbụna mgbawa mmiri hydraulic, ikpo okwu agaghị ada ada iji jide n'aka na ọ nweghị nchekwa.
v Kwadoro ya ngbanwe ọkwa nkata, mee ka nkata ịhazigharị dịkwuo mfe.
v Kwadoro ya Ogwe torsion na nnukwu ọrụ mmịkpọ, nke na -eme ka ọ ka mma ịga ije n'okporo ụzọ.
v Sistemụ mkpu mkpuchi mmanụ mmanụ, chetara gị dochie mmanụ hydraulic mgbe enwere adịghị ọcha na mmanụ.
v Usoro nkata na ogwe aka na -ezere ngwa ahụ na -ama jijiji n'oge njem.
v Mmadụ Ikanam Iju mmiri ọkụ n'elu ikpo okwu maka ịrụ ọrụ
v Ejiri ọkụ breeki ejikọrọ na traktọ.
v Ejiri ọkụ ọkụ kpachapụ anya na ụkwụ ọ bụla.
v Nkata aka mgbochi mgbochi.
v Ejiri ngwa nchekwa iji kpuchido onye ọrụ.
v Igwe kwụ otu ebe Rotary, ntụgharị 360 °.
v Ogologo ihu kwụ ọtọ sitere na 5m ruo 10.5m jiri ogwe aka telescopic
v Max 40Km na -agba ọsọ
v Ọtụtụ ike maka nhọrọ, dịka AC, DC, AC & DC, Diesel, Gas na ndị ọzọ.
v Nye EGO ngwa ngwa iyi maka nnọchi ngwa ngwa
Aerial Boom Lift ọnụahịa
Ọnụ ego agbago agbadoro agbadoro agbagọ
Nkọwapụta Boom Lift ọnụahịa
Ọnụ ego Boom ọnụahịa
Ọnụ ego elele eletrik
Ọnụ ego mkpọtụ mkpọtụ
Onwe Propelled Boom Lift ọnụahịa
Ọnụahịa obere mbuli elu
Towable Spider Boom Lift ọnụahịa
Ọnụahịa Trailer Boom Lift
Onwe onye kpaliri Telescopic Boom Lifte